China esd pp yakagadziriswa turnover bhokisi Mugadziri uye Mutengesi | Sihai
ESD pp yakakwenenzverwa turnover bhokisi
Pk chemarata pepa rekudzoka bhokisi rinoitwa ne pp chemarara pepa, iyo pepa yakagadziriswa pepa inochinjika diecut neakasiyana saizi bhokisi, rakasiyana chimiro kurongedza bhokisi, bhokisi rakanyanya kushandiswa kwezvigadzirwa mutero, storages, kutumira uye kurongedza. Sekureva kweakasiyana zvigadzirwa chikumbiro kurongedza, iro rekutora bhokisi riine ESD pp mabhokisi bhokisi uye yakajairwa pp chemarara bhodhi rekutangisa, maererano neakasiyana ekumisidzana pamusoro, iyo ESD pp isina mhango bhokisi ine ESD pp mabhokisi bhokisi uye Conductive pp chemarata bhokisi, ESD pp mhango bhokisi pamusoro pemvura ndeyegumi6 - 109, uye iyo inoitisa pp chemarata bhokisi pamusoro kuramba ndeye 103 - 105. Pp corrugated ESD turnover bhokisi mhando nyowani yezvakatipoteredza yekuchengetedza zvinhu, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mukutakura, kurongedza, kuchengetedza uye kutakura emagetsi zvigadzirwa uye zvigadzirwa mune yekugadzira maitiro.
Kazhinji, iyo pp yakashongedzwa esd yekudzoka bhokisi inoshandisa 2-6mm gobvu ESD pp chemarata jira rakagadzirwa, iyo GSM maererano zvakasiyana chikumbiro kugadzirwa dzakasiyana dzakasimba pp mhango jira, sekureva kwakasiyana founction, inogona kugadzirwa mutero bhokisi, kurongedza bhokisi, mutero mudziyo, kurongedza mudziyo, bhokisi reESD, bhokisi rekushandura ESD nevamwe bhokisi rekupakata reESD, bhokisi rekuchengetera uye bhokisi rekuchengetera, bhokisi reantistatic repurasitiki, bhokisi rekubvisa michero, anti-static bhokisi rekutakura, bhokisi repurasitiki, murazvo unodzora bhokisi repurasitiki, mutero webhokisi bhokisi. , chinwiwa chekudzoka bhokisi, pesticidhi yekudzoka bhokisi, chikafu nemuriwo kurongedza mabhokisi, epurasitiki ekudzoka bhokisi, chaiyo zvigadzirwa zvehomwe yemukati, mishonga yekurongedza mabhokisi, eposvo mabhokisi, emagetsi zvigadzirwa kurongedza kweplate, dura pad, kurongedza dura pad, padanda repurasitiki pad bhokisi , nezvimwe.
Pp makorari ESD turnover bhokisi Zvimiro:
Iine hunhu hwekupeta kuramba, kukwegura kuramba, hombe kutakura simba, kudhirowa, kumanikidza, kubvarura, kupisa kwakanyanya uye rakapfuma ruvara. Inoitwa mubhokisi-mhando rinotenderera bhokisi, iro rinogona kushandiswa kwese kwekutangisa uye kupedzisa chigadzirwa chekutakura kurongedza. Icho chiremera chakareruka, chakasimba uye chakasimba. Iyo pp yakavezwa ESD turnover bhokisi zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi inogona kuve yakagadzirirwa kugadzirwa kwakasiyana siyana, hukuru, aruminiyamu chiwanikwa chivharo kumucheto, inogona kuvharwa, isina guruva, yakanaka uye nerupo chitarisiko.
pp hollow esd turnover bhokisi rakagadzirwa uye rakagadzirwa zvinoenderana nesaizi yakapihwa nevatengi, kuti uwane kurodha zvine musoro, uye akawanda mabhokisi anogona kusangana, zvinobudirira kushandisa nzvimbo yemusangano, kuwedzera zvikamu zvekuchengetedza, uye chengetedza mutengo wekugadzira.
Pp isina mhango pepa ESD turnover bhokisi kunyorera:
Pp hollow esd turnover bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji, inogona kubvisa static magetsi, huwandu hukuru hwezvinhu zvemagetsi uye zvigadzirwa mune yekugadzira nzira yekutapa kurodha, kurongedza, kuchengetedza uye kutakura.
Zvichienzaniswa nejekiseni zvigadzirwa, pp isina mhango jira ESD bhokisi rine zvakwakanakira zvekushomeka, inoshanduka dhizaini, inochinjika chimiro uye hapana chikonzero chekuvhura jekiseni muforoma. Panguva imwecheteyo, izvo zvinhu zvinogona kuchinjika kudzora nekuwedzera anti-kunofambira mberi, inoitisa base zvinhu, nezvimwewo, iyo ESD pp mhango ndiro inogona kuburitsa ine inoitisa uye inorwisa-isingasvikike mabasa. Iyo yepamusoro resistivity yeanti-static pp bhodhi inogona kudzorwa pakati pegumi3 uye gumi9.
Pp Hollow sheet zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa mune zvemagetsi, kurongedza, michina, indasitiri yakajeka, basa repositi, chikafu, mushonga, mishonga yekuuraya zvipuka, midziyo yemumba, kushambadza, kushongedza, stationery, optical magnetic technology, biological engineering mushonga uye hutano nemamwe maindasitiri. Rudzi rutsva rwezvakatipoteredza zvekuchengetedza zvigadzirwa.
Pashure: 4X8 Coroplast pepa rechiratidzo uye kushambadza - Sihai
Zvadaro: esd pp mhango pepa
Yemahara sampuro yeChina Antistatic Hollow PP Bin ...